भक्तपुरमा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
फागुन–२७ । भक्तपुरकाे सूर्यविनायक नगरपालिका–८ प्रहरी चेकपोस्ट नजिकै जगातेबाट सल्लाघारी जाँदै गरेको बा. ३ ख. ८८१८ नम्बरको मिनिट्रकको ठक्करबाट घाइते भएका भक्तपुर बस्ने सुदिप तामाङको उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको महानगरीय ...
डोल्पामा भारी हिमपात, जुफाल विमानस्थल अवरुद्ध
फागुन–२७ । डोल्पामा भारी हिमपात भएको छ । भारी वर्षासँगैको हिमपातले जुफाल विमानस्थलमा हवाइसेवा ठप्प भएको छ । शुक्रबार बिहानदेखि नै जिल्लाभर सुरु भएको भारी हिमपात अझै जारी छ । विमानस्थलमा नेपालगन्जबाट ...
दृष्टिविहीन विक दम्पतीले तीन छोरीलाई पढाउन सकेनन्
फागुन–२७ । म्याग्दीकाे ताकम–३ रातमाटाकी ११ वर्षीया निरुता विक विद्यालय जान छाडेको पाँच महिना भयो । बाबा र आमा दुबै दृष्टिविहीन हुन् । घरपरिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक छ र यसैकारण उनका ...
फागुन–२७ । एकसातादेखि मौसममा बदली भई चिसो बढ्दै जाँदा भएको भारी हिमपातले कर्णाली पुनः ढाँकिएको छ । हिमपातले सबैभन्दा यहाँका बालबालिका, महिला, वृद्ध, अशक्त अपाङ्गलाई बढी समस्या परेको छ । घरबाट ...
राजधानीमा पेट्रोलको हाहाकार
फागुन २७ । राजधानीमा एकाएक फेरि पेट्रोलको कृत्रिम हाहाकार देखिएको छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको कुनै समस्या नरहेको दाबी गरिरहे पनि बिहीबार राजधानीका अधिकांश पम्पमा पेट्रोल भर्नेको लामो लाइन ...
ZERO अफ दि इयरमा लोकमान एक नम्बर, बाँकी को को परे ?
फागुन २७ । जिरो अफ दि इयरको एक नम्बरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की परेका छन् । कान्तिपुर साप्ताहिकले होली पर्वको सन्दर्भमा वर्षका जिरो अफ द इयर सार्वजनिक ...
जंगबहादुरको श्राद्ध !
फागुन २७ । नेपाल सरकारले सम्झिने पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् श्री ३ जंगबहादुर राणा । जसको निधन भएको १ सय ४० वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले श्राद्ध गराउँदै आएको छ । सरकारकै पहलमा फाल्गुन द्धादशी ...
जाजरकोटमा यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या २६ पुग्यो २० को सनाखत
फागुन २७ । जाजरकोटमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या २६ पुगेको छ । घाइते ३० भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ । सदरमुकाम खलंगाबाट खारातर्फ गईरहेको लु ३ ख २२७९ नम्बरको ...
चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडकमा कालोपत्रमाथि ढल
फागुन–२६ । चाबहिल–बौद्ध–जोरपाटी सडकमा ढल फुटेर यातायात सञ्चालन र सडकपेटीमा आवतजावत गर्नमासमेत समस्या भएपछि सरोकारवाला निकायका अधिकारीले बिहीबार अनुगमन गरेको छ । यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद रामेश्वर फुयाँल, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका ...
जाजरकोटकाे बस दुर्घटनामा ११ को मृत्यु, ३९ घाइते
फागुन–२६ । जाजरकोटको पासाघाटमा भएको यात्रुबहाक बस दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३९ जना घाइते भएका छन् । बिहिबार दिउँसो ४ मा लु ३ ख २२७१ नम्बरको बस दुर्घटनामा ...
बाजुराको दुर्गम गाविसमा स्थायी नुन डिपो स्थापना
फागुन–२६ । बाजुरा जिल्लास्थित उत्तरी भेगको दुर्गम गाविसका लागि स्थायी नुन डिपो स्थापना गरिएको छ । उत्तरी भेगको बिच्छ्या र रुगिन गाविसलाई लक्षित गर्दै नुन डिपो स्थापना गरिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ...
चितवनका विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै
फागुन - २६ । सीमान्तकृत बालबालिकाका लागि दिइने दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारलाई लक्षित गरी दिइने खाजा कार्यक्रमका कारण तल्लो कक्षामा विद्यालय आउन छाड्ने ...
खानेपानी संस्थानले २० लिटरको खानेपानीको जार बजारमा ल्याउने
फागुन २६ । खानेपानी संस्थानले २० लिटरको खानेपानीको जार दुई हप्ताभित्र बजारमा ल्याउने भएको छ । संस्थानले पानी उत्पादन गरी वितरण गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । सबै सरकारी कार्यालयमा पानी ...
चितवनमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
फागुन २६ । चितवनमा बसको ठक्करबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । राप्ती नगरपालिका १ लोथरमा बुधबार बेलुका साढे ७ बजे ना १ क ३६९४ नम्बरको बसले बा ७९ प ३१३६ नम्बरको ...
कक्षा ११ को नतिजा ‘लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा निकाल्ने तयारी
फागुन २६ । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ को नतिजा ‘लेटर ग्रेडिङ’ पद्धतिमा निकाल्ने तयारी गरेको छ । गत वर्षदेखि कक्षा १० को परीक्षा ९तत्कालीन एसएलसी० लेटर ग्रेडिङ सुरु गरेको मन्त्रालयले यस वर्षदेखि ...
नारी दिवसको अवसरमा नेपाल-भारत फाउण्डेशनद्वारा तीन दिने कार्यक्रम सम्पन्न
फागुन - २५ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा लागि बीपी कोइराला भारत नेपाल फाउण्डेशनले सञ्चालन गरेको तीन दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त फाण्डेशनले कार्यक्रम मार्च ६ देखि मार्च ८ ...
रक्सीले मातेर आफ्नै साथी कुट्न थालेपछि पृथ्वीबहादुर पाण्डेका छोरा सिवान्त विवादमा
फागुन २५ । बाबुचाहिँ रक्सी छुँदै नछुने, अर्बौं सम्पत्तिको मालिक भनेर के गर्नु ? छोरो जाँडले फिट्टु भएर रात बिरात साथीलाई पिट्दै हिँडने । यस्तो भएको नेपालकै चर्चित इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष ...
‘महिला सम्मानको आधार, सीपमुलक हात र स्वरोजगार’ भन्ने नाराका साथ १ सय ७ औं नारी दिवस मनाइदै
फागुन २५ । आज १ सय ७ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रको आयोजना गर्दै मनाइदै छ । हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने गरिन्छ । ...
फागुन - २४ । दुई नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले तीन जनाको ज्यान जाने गरी सोमबार सप्तरीमा भएको घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ...